Masar: Putin oo xaruntii u horreysay oo Nuklear ah u dhisaya Al-Sisi – Kasmo Newspaper
Masar: Putin oo xaruntii u horreysay oo Nuklear ah u dhisaya Al-Sisi
Updated - December 12, 2017 4:49 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Masar ayaa qaaday tillaabo kale oo uu ku dhisanayo Xaruntiisii korontada laga dhaliyo Nuklearka ee Dabaa, middii u horreysay Afrikada Woqooyi, ka dib 2da ka dhisan Koofur Afrika.
Qandaraasyada waxaa lagu saxiixay booqashadii Isniintii shalay, 11kii Disember 2017, Vladimir Putin ku gaaray Qaahira, si horey loogu wado mashruuca daahfurkiisu dhacay 2015kii, laguna dhisayo 1kii u horreeyay 4 mashiin (Reactors) sannadka 2022ka gudihiisa.
Xarunta waxaa laga dhisi doonaa xeebta Badda Dhexe (Mediterranean Sea), qiyaastii 170 Km galbeedka Alexandria, goob ay horey Sofiyetkii uga dhiseen 50meeyadii Reactor tijaabo ah.
Alexei Likhachev, Agaasimaha Shirkadda Rosatom ee fulinaysa dhismaha ayaa hoosta ka xarriiqay in: “Saxiixyada 2da Wasiir ee goobjoogga ka yihiin Putin iyo Al-Sisi matalayaan heshiis Rekord ah oo taariikhda Nuklearka”.
Marka laga reebo 2 “Reactor” oo Koofur Afrika (Koeberg iyo Duynefontein), Qaaradda Afrika ma lahan kuwo kale, kamana socdaan hadda dhismayaal, sida ay qirayso Barta Internetka Ha’yadda IAEA. Laakiin qorshayaal socda asii aan sida kuwa Masar loo ballansanayn, waxay ka jiraan xitaa dalalka Nigeria, Kenya, Marokko iyo Algeria, sida ay qirayso Barta “World Nuclear Association”.
Putin ayaa, isaga oo soo xiganaya mashruuca (Generetion 3+) ee dhashay masiibadii Fukushima ka dib, hoosta ka xarriiqay in Dabaa laga dhisi doono “Teknoloojiyada ugu casrisan uguna badbaadada badan”.
Rosatom waxay Warshadda quwaddeedu ka badantahay 5ta Gigawatt gacanta ku sii hayn doontaa 60 sano, maalgalintuna waxay u dhexeysaa $21-27 Bilyan oo Dollar, hadba sida qiyaasuhu noqdaan.
Waxa sii adkaynaya xiriirka istrateejiga ah ee Masar, oo noqotay barta tusaalaha u ah soogalitaanka, (siyaasad-dhuleed ahaan “Geopolitics”), Moskow ee Afrida Woqooyi iyo Bariga Dhexe, waa maalgashiga canshuurtiisa dulsaarka 80-85% la khafiifiyay.